အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 164
Maung Yit – Well wisher for Maung Wuntha …
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး ၂၄ ဆရာမောင်ဝံသ ကျန်းမာပါစေ မောင်ရစ်၊ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၃ ကနေ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ လွတ်လပ်စိုးက သူ့ဖခင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကြောင်း ရေးထားတယ်။ ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ စိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆရာကိုယ်တိုင်က သူ့စာဖတ်သူတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေကို သူသတိကောင်းနေတဲ့အခုိုက်မှာ အကြောင်းကြားပေးဖို့ မှာတဲ့အကြောင်းကို ရေးထားပါတယ်။ ဆရာ့ကို ကျနော့်အဖိုး၊ အဖွား၊ အဖေ၊ အမေ၊ ညီမတွေရဲ့ စာမူတွေကို ရွေးချယ်၊ ထည့်သွင်းဖော်ပြသူ အယ်ဒီတာ၊ ထုတ်ဝေသူတဦးအဖြစ် သိကျွမ်းခဲ့ရာကနေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ နောက်ပိုင်း ဆရာ့မဂ္ဂဇင်းမှာ စာရေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်ကနေ စာရေးသူဘ၀ စခဲ့ရတာပေါ့။ ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ အတွေးအမြင်ပရိသတ်တဦးအဖြစ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ရပ်တည်ခဲ့၊ ဆရာတို့ စာအုပ်တွေ၊ စာမူတွေကို အမြဲလေ့လာပြီး ပညာသင်ယူခဲ့ရသူလည်း...
စဉ်းစားစေချင်တာတွေ (၁) (ကင်ဆာကို ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီး ကာကွယ်ပါ) မင်နီရှဲလ်၊ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၃ အခုတလော မြန်မာဆရာဝန်တွေ ပြည်ပကနေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာကြပါဆိုတဲ့ အသံတွေ ဟိုမှာ ဒီမှာ (မိုးမခအပါအ၀င်) ကြားနေ။ ဖတ်နေ ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ပြည်ပရောက် မြန်မာဆရာဝန်တွေက Superman လိုပဲ အပ်ချလောင်းဆို့ပြီး နေ့ချင်းညချင်း ပြောင်းလဲမှုတွေ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ယိုယွင်းခဲ့တဲ့ ပညာရေးစနစ်၊ ကျန်းမာရေးစနစ်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ Infracturer လိုပါတယ်။ စာမျက်နှာကို ငဲ့ညှာပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေ လူတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်တာလေးတွေ ခပ်တိုတိုရေးဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ စာရိုက်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်း ငဲ့ညှာရပါသေးတယ်။ လောလောဆယ် အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးပညာပေး...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ( ၂၆)အောင်ဒင်၊ ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၃အပိုင်း (၂၆) လွှတ်တော်နှင့် မတရားသောဥပဒေများ ဖျက်သိမ်းရေး (စ) နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် လိုအပ်သော အသုံးစားရိတ်ဆိုင်ရာ အထူးရန်ပုံငွေဥပဒေဒီဥပဒေက နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာသာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေ အမှတ် ၁၀/၂၀၁၁ အဖြစ်နဲ့ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ နအဖဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ၊ အများပြည်သူမသိစေချင်လို့ သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းမှာသာ စာမျက်နှာ ၄၇၅ နဲ့ ၄၇၆ မှာဖော်ပြပါတယ်၊ ဒီဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) မှာ “ဤဥပဒေသည် ချက်ခြင်းအာဏာတည်ရမည်” လို့ ပြဋ္ဌန်းထားတာမို့ ထုတ်ပြန်တဲ့...
ကာတွန်း စောငို – ၄၀၁ မရှိတော့ဘူး … ငါလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ရေပွက်ပမာ … ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
Saw Ngo – Shwe Mann Plot
(ပထမအပြော) (ဒုတိယအပြော) ကာတွန်း စောငို – ရွှေမန်း၏ ဇာတ်ကွက်များအကြောင်း ဇွန် ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
Ha Man Thazin – Dare to Change ?
ပြောင်းရဲရဲ့လားဟေမန်သဇင်၊ ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၃ မနေ့ က ကလေးတွေ ပျော်ကြပါစေ ဆိုတဲ့ ပိုစ်လေးတင်လိုက်တော့ ကွန်မင့် တွေ အများကြီး တွေရတယ်။ ကြုံနေရတဲ့ အလွဲတွေ ကြောင့် ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တွေပေါ့။ ဒီထဲ ညီမ ခင်သစ္စာရဲ့ကွန်မင့် ကို မြင်လိုက်တော့ သူနဲ့ အတူ မောသွားလိုက်တာ။ နှုတ်ဆက်ပွဲ လုပ်ဖို့အလှုတသိန်း၂သိန်းလောက်တဲ့။ ဆရာမတွေကို ကန်တော့ ဖို့ ဆိုတော့ ဘယ်မိဖ ကငြင်းရဲ ပါ့မလဲ။ သြော် တို့ တွေမှာလည်း အားနာနေရတာနဲ့ ။ အမြင်မတော် ဖြစ်နေပါ့မယ် ဆိုတာတွေနဲ့ တသက်လုံး နစ်လို့ ကို မဆုံး တော့ဘူးနော်..လို...
ကာတွန်း စောငို – ပွဲကြီး ပွဲကောင်း ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
Saw Ngo – Cartoon
ကာတွန်း စောငို – မြန်မာပြည်က အမွေစား အမွေခံ ‘အစိတ်သား” အတော်လေးတယ် … ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
Saw Ngo – the path with gold
ကာတွန်း စောငို – လမ်းတိုင်းကို ရွှေခင်းထားတယ်၊ ရဲရဲ နင်းပြီးသာလျောက် … ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ဒ ဂု န် တာရာေ နွ ဦး( ၆ )အောင်ဝေးဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၃ ရဲဘော်တို့ - နွေဦးကို ချီတက်ကြ။ “ငါတို့ ဟာ ပေဖြစ်ခံရဲရုံသာမက တူဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ရမယ်” (ဒီမီထရော့ဗ်) ဟိုတုန်းက ပေါ်တီယာ ရင်ခုန်သံ နိုင်ငံတကာ။ ဒီနေ့ က လူ့ အခွင့်အရေး ဗဟုရာဇ်တေး။ “ငါ့ ကို ဒီမိုကရေစီ ပြန်ပေး” “ငါ့ ကို ဒီမိုကရေစီ ပြန်ပေး” “ငါ့ ကို ဒီမိုကရေစီ ပြန်ပေး” စစ်ကလည်း ညောင်း စနစ်ကလည်း...
Page 164 of 197«1...162163164165166...197»